Home » Vaovao momba ny fizahantany » Nasehon'ireo mpitsidika an'i Anguilla ny fitiavana tamin'ity ririnina ity
* Nankafy ny vanim-potoanan'ny ririnina namaky ny nosy *
Niarahaba ny vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao i Anguilla tamin'ny ririnina, ka nahatonga ny vanim-potoanan'ny ririnina tsara indrindra tao amin'ny 27 taona. Nidina an-tsehatra tany Anguilla ireo vahiny, mba hilomano amn'ny morontsiraka 33 feno nosy, voahodidin'ny ranomasina safira; santionany ireo karazan-tsakafo mahavariana mahavariana mahavariana; ary mankafy ny fandraisam-bahiny mafana sy malala-tanana izay nalaza be ilay nosy.
Fanehoana iray fanampiny momba ny fanarenana mahavariana ny nosy, dia niditra an-tsokosoko volana iray hafa i Anguilla tamin'ny volana martsa, niaraka tamina mpitsangantsangana 11,940. Tsy ny marsa ambony indrindra teo amin'ny tantara ihany no manamarika izany, fa koa ny totalin'ny isam-bolana avo indrindra amin'ny tantaran'ny indostrian'ny fizahantany ao Anguilla. Ny tarehimarika dia maneho fiakarana 29.16% nandritra ny vanim-potoana nitovy tamin'ny 2017, ary fiakarana 22.55% tamin'ny martsa 2016, volana izay nitana ny firaketana ho an'ireo mpizahatany indrindra.
Nanohy ity fizarana fandresena ity ny volana aprily, satria ny fahatongavan'ny 9,790 voarakitra no isan'ny mpizahatany betsaka indrindra isam-bolana amin'ny volana aprily nanomboka tamin'ny taona 1993. Ny fahatongavan'ireo mpizahatany tamin'ny volana voalohany, (Janoary ka hatramin'ny martsa 2019) tamin'ny 30,135, no avo indrindra voarakitra hatramin'ny nanomboka nanara-maso ny fahatongavan'ireo tonga ny birao fizahan-tany Anguilla.
Nandritra ny efa-bolana voalohany tamin'ny taona (Janoary hatramin'ny aprily 2019), vahiny tsy latsaky ny 40 no nandany alina iray na maromaro tany Anguilla. Ny nosy dia tokony hanintona ny 50% amin'ny totalin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany ho an'ny taona 2016, taona tsara indrindra ho an'ny nosy hatreto. "Andao hifety fa tsy hanjary ho afa-po," hoy Ramatoa Donna Banks, Lehiben'ny Birao Mpizahatany Anguilla. “Mbola betsaka ny asa tsy maintsy hatao; ny tanjonay dia mijanona ho fiakarana 20% amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany amin'ny taona 2016. Ankasitrahanay ary manome lanja ny fanohanana sy ny fiaraha-mientana ataon'ireo mpiray antoka aminay rehetra izahay, ary ny mponina ao Anguilla, amin'ny fanampiana anay hanatratra ireo dingana lehibe ho an'ny indostrianay.
Raha mila fanazavana momba an'i Anguilla dia tsidiho ny tranokala ofisialin'ny Anguilla Tourist Board: www.IvisitAnguilla.com; araho amin'ny Facebook: Facebook.com/AnguillaOfficial;